बच्चाहरूको स्वास्थ्य | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: बालबालिकाको स्वास्थ्य
तपाईं बालबालिकाको ट्विकी आर्थोपेडिक जूतालाई कसरी मनपर्छ? यदि वास्तवमा होइन, कसले तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ?
तपाइँ ट्विकी बच्चाहरूको अर्थोपेडिक जुत्ता कसरी मन पराउनुहुन्छ? यदि होईन भने, कुन सिफारिस गर्नुहुन्छ? यो फर्मको कुरा होइन, तर कसरी तपाईंले आफ्नो खुट्टा विकृतिहरूको लागि सही जुत्ता छनौट गर्नु भएको छ। twiki- ...
के यो घरमा भ्वाईस परिवर्तन गर्न सम्भव छ र कसरी ???
यो घरमा आवाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ र कसरी ??? कम्प्युटरमा? यूट्यूब भिडियो खोज्नुहोस्। र यदि यथार्थमा त्यसो भए .. डाक्टरमा जानुहोस् (जुन अपरेश गर्ने एक हो, म बिर्सिएँ ...
बच्चाहरु गाल छ
बच्चालाई गालामा दर्द हुन्छ गालामा दुखाइ बिभिन्न रोगहरुसँग हुन सक्छ। गालामा दुखाइका कारणहरू गालामा पीडादायी संवेदनाहरूले पल्पिटिस, क्यारीज, पीरियडोन्टाइटिस र अन्य दन्त रोगहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि एक ...
डायस्किनेस्ट मन्टोक्स जस्तै हो, सकारात्मक रूपमा नराम्रो, नकारात्मक राम्रो ... वरिपरि हिंड्नुहोस् र लालिमा हुनुपर्दछ हेर्नुहोस् र यो सामान्य हो। २० मि.मी. मानक सम्म (व्यासमा रातो दाग) ...
ओटिप्याक्स ड्रप - कसले प्रयोग गर्‍यो? यसको प्रभाव कस्तो छ?
ओटिप्याक्स ड्रप - कसले प्रयोग गर्‍यो? यसको प्रभाव कस्तो छ? छुट्टीमा, मेरो कान दुखाइयो, मैले दिनमा drops पटक तीन पटक ड्रप गरे, सबै थोक सुपर ड्रप भयो! मलाई लाग्छ कि तपाईं किन जानुहुन्छ ...
क्या म आफ्नो बच्चाहरु लाई एलर्जी रेशम संग स्नान गर्न सक्छु? म आफ्नो बच्चा एलर्जी रैश संग कोलाहट सकता हूँ ????
के तपाईं एलर्जीको दागले बच्चालाई नुहाउन सक्नुहुन्छ ???? के तपाईं एलर्जीको दागले बच्चालाई नुहाउन सक्नुहुन्छ ???? क्रममा !!! निश्चित हुन सक्छ केवल पानीको तापक्रम धेरै तातो हुनु हुँदैन, किनभने छाला जल्नेछ र बच्चा ...
जिब्रोको बिरुद्ध दुलहीको लागि अभ्यास गर्दछ
जिब्रोमुनि लगामका लागि अभ्यास गर्नुहोस् तपाईलाई जिब्रो उठाउनु पर्ने व्यायाम गर्छ, यो उनीहरूलाई धन्यबाद हो जुन लगाम तानेको छ! तर १. years वर्षको उमेरमा, बच्चालाई यो कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यसैले तपाईंले मद्दत गर्नुपर्नेछ! ...
बच्चाहरु मा कसरी युद्ध हटाउनुहुन्छ?
कसरी बच्चाबाट मौसा हटाउने? तपाईं यसलाई एक dermatologist संग जलाउन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं सेल्यान्डिन वा अरू केहि किन्न सक्नुहुन्छ र आफैंमा यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। मौसा तिनीहरूको घटनाका कारणहरू पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्। यो सुविधा को लागी मानिन्छ ...
नाकमा यस्तो किसिमको एक्कासिटिटिड + ड्रप
यो कस्तो प्रकारको एक्टिसाइड हो? नाकमा थोप्ने + न्यानो, थोरै नुनिलो पानी, कुल्नु भनेको त्यो नाकको थोप्लामा केही थोपा। वा यो प्रयास गर्नुहोस्:ffuratsilin ट्याब्लेटहरूलाई उमालेको पानीको गिलासमा विघटन गर्नुहोस् (अन्यथा तिनीहरू तितर बितर हुँदैन) ...
पारारी शरीरबाट कसरी हटाउन सकिन्छ र?
कसरी र कसरी तपाईं शरीरबाट पारा हटाउन सक्नुहुन्छ? युनिटिओल टौरिन मेथुनिन तर सामान्यतया यो एक डाक्टरले उपचार गर्नु पर्छ। र निदान पनि बनाउन। मानव शरीरबाट पारा हटाउन धेरै गाह्रो छ। र ...
adenoids को लागि उपचार
एडेनोइडको लागि उपचार १. घाँसको पातलो पात, जब यो खिलन्छ, मासको ग्राइन्डरमा मोड्छ, रस निचोरेर। रसको एक थोपा 1 पानीको थोपा लागि। २. एडेनोइड्सको उपचारको लागि मह मह र बीटको मिश्रण हो।
38.5 महिनामा 10 महिना बिना लक्षणहरू
तापमान .38.5 10..10 कुनै लक्षण बिना नै १० महिनाको बच्चामा, टन्सिल १० महिनामा ठूलो भयो ?! कहाँ बाट ?? म तपाईंलाई विश्वास गर्दिन कि तपाईंले घरमा डाक्टर बोलाउनुभएको छ .. एम्बुलेन्स कल गर्नुहोस्, किनकि before भन्दा पहिले ...
3 साल को बच्चा - एक प्रभावकारी खाँसी पकाउनुहोस्। सुकेको खरेल कहिलेकाहीं उल्टीमा आउँछ। कहिलेकाहिँ यो खाए। मद्दत
बच्चा years बर्षको, प्रभावकारी खोकी प्रिस्क्रिप्शन दिनुहोस्। सुख्खा खोकी कहिलेकाँही बान्ता गर्न आउँछ। कहिले काँही उनको घाँटी खाली मद्दत गर्नुहोस्, यदि तपाईंलाई एमडी, १ गिलास गाजरको रस र २- t चम्मच एलर्जी छैन भने।
एक महिनाको बच्चाको लागि9rhinitis को उपचार गर्ने उत्तम तरिका के हो?
9 महिनाको बच्चाको लागि नाकमा बग्ने उपचार गर्ने उत्तम तरिका के हो? यस्तो बच्चाको नाकबाट बहेको नाक उसको र उसका आमा बुबा दुवैको लागि वास्तविक सजाय हो! यो धैर्य र आराम लिन्छ! र एउटा अर्को कुरा: भासोकनस्ट्रक्टरबाट ...
एक बच्चा3वर्ष मा चलने नाक को उपचार कसरि गर्नुहोस?
3 बर्षको बच्चामा कसरी बहेको नाकको उपचार गर्ने भन्ने सल्लाह दिनुहोस्? मैले मेरो छोरालाई निको पारें (to..7,5 महिना उसलाई), Vibrocil बूँदाहरूबाट बहेको नाक निको भयो र डाक्टर आमाको साथ उसको कुर्कुच्चो मलाउँदै ... तपाईं तारा चिह्नको साथ सक्नुहुन्छ। अगाडि ...
डाक्टरले भनिन् कि लिम्बाम्बिया, कस्तो छ र कस्तो खतरनाक छ?
डाक्टरहरूले भने कि Giardia, यो के हो र कसरी खतरनाक, र यसको उपचार कसरी गर्ने? La # 769; mblii, वा zhia # 769; rdii (lat.Giardia) परजीवी flagellate आदेश डिप्लोमोनाडाइडाबाट बचाउँछ, मानव सानो आंतमा परजीवी र ...
2,2 वर्षको बच्चा। मेरो पेट स्पाज संग दुख्छ। सबै केहि सामान्य छ, त्यसपछि त्यो चिल्ला गर्न, आफ्नो पेट रमाईरहेको छ, रोँदै
बच्चा २.२ बर्षको भयो। पेट ऐंठनको साथ दुख्छ, सबै सामान्य छ, त्यसपछि यो चिच्याउन शुरू हुन्छ, पेट खसाल्न, केटी रोई सक्छ, हुन सक्छ तपाईं विचलित हुन सक्छ, तर बच्चा केहि निल्यो वा केहि गलत पिए, ...
मेरो बच्चा साइनस नोड डाइमेक्शन संग नै निदान गरिएको थियो। यो के हो?
मेरो बच्चा साइनस नोड डिसफंक्शनको साथ पत्ता लागेको थियो। यो के हो? हृदय ताल गडबडी सम्भव छ .... यदि एक AB नाकाबन्दी छ भने हेर्नुहोस् .... Degrees- degrees डिग्री ... साइनस नोड डिसफंक्शन ब्राडीकार्डिया र टाचिकार्डियाको वैकल्पिक अवधिको बोटको विशेषता हुन्छ, उठ्छ ...
Polyoxidonium Poloxoxidonium suppositories एक इम्युनोलजिष्ट द्वारा तोकिए बमोजिम अन्य औषधिहरूको साथ संयोजनमा प्रयोग गरियो। प्रभाव पक्कै पनि सकारात्मक छ। उसलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। यसले हाम्रो बच्चालाई धेरै मद्दत पुर्‍यायो, तर हामीले उसलाई ...
बच्चासँग 2, एक 38,5 तापमान, रातो घाँटी र घाँटीमा केही pustules छ। कसरी छिटो उपचार गर्ने। के तपाईं एन्टिबायोटिक बिना गर्न सक्नुहुन्छ?
२ वर्षको बच्चाको तापक्रम238,5..XNUMX, रातो घाँटी र घाँटीमा धेरै पसलहरू छन्। कसरी छिटो उपचार गर्ने? के म यो एन्टिबायोटिक बिना गर्न सक्छु? बरु डाक्टरमा भाग्नुहोस्, तपाईं यहाँ भएका उपचार विधिहरूको प्रयोग गर्नुहुनेछैन।
56 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,616 प्रश्नहरू।